वाशिङ्गटन राज्य अन्तर्गत COVID-19 (नोवल कोरोना भाइरस) सम्बन्धी - जानकारी, सेवा तथा संसाधनहरू | Washington State Coronavirus Response (COVID-19)
वाशिङ्गटन राज्य अन्तर्गत COVID-19 (नोवल कोरोना भाइरस) सम्बन्धी - जानकारी, सेवा तथा संसाधनहरू
कोभिड-19 हटलाइन: कामदार, व्यवसाय, खोप अपोइन्टमेन्ट र थप कुराहरूमा मद्दत गर्नुहोस्
तपाईंसँग कोभिड-19 बारे कुनै पनि प्रश्नहरू भएमा वा खोप अपोइन्टमेन्टहरू बनाउन मद्दत आवश्यक पर्छ भने, कृपया 1-800-525-0127 मा कल गर्नुहोस् र # थिच्नुहोस्। उनीहरूले प्रतिक्रिया दिएपछि, दोभाषे सेवाहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न आफ्नो भाषा भन्नुहोस्। हटलाइन दिनहुँ खुल्ला हुन्छ र यसको समय Department of Health को वेबसाइटमा सूचीबद्ध गरिएको छ (अङ्ग्रेजीमा मात्र)।
व्यवसाय उल्लङ्घन बारे रिपोर्ट गर्नुहोस्
कर्मचारी र ग्राहकहरूका लागि उपयुक्त स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्डहरू स्वीकार गर्न व्यवसायहरू आवश्यक पर्छ। तपाईं उल्लङ्घन बारे रिपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया तपाईंको भाषामा मद्दतको लागि माथिको कोभिड-19 हटलाइन नम्बरमा कल गर्नुहोस्। कसैले तपाईंलाई उल्लङ्घन बारे प्रश्नहरू सोध्नेछ र तपाईंको तर्फबाट उजुरी पेश गर्नेछ। तपाईंलाई उजुरी पेश गर्न आफ्नो नाम वा सम्पर्क जानकारी आवश्यक पर्ने छैन।
तपाईं कोभिड-19 उल्लङ्घन रिपोर्ट गर्नुहोस् पृष्ठ मा अङ्ग्रेजीमा उजुरी दायर गर्न सक्नुहुन्छ।
कृपया तपाईंले आफ्नो नाम वा सम्पर्क जानकारी उपलब्ध गराउनुहुन्छ भने, कसैले उक्त जानकारीका लागि सार्वजनिक रेकर्डहरूको अनुरोध दायर गरेको खण्डमा यो खुलासा हुन सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस्। राज्यको सार्वजनिक रेकर्डहरूको ऐन, RCW 42.56 अन्तर्गत आवश्यक भए अनुसार गर्भनरको गोपनीयता सूचना (अङ्ग्रेजीमा मात्र) व्याख्या गरिएका रेकर्डहरू खुलासा गरिनेछ।.
कामदार, व्यवसाय र संगठनहरूलाई थप मद्दत गर्नुहोस्
अनुवादन सेवाहरूको प्रयोग गरेर, हटलाइनले तपाईंलाई सामान्य मार्गदर्शन र संसाधनहरूमा निर्देशित गर्न सक्छ। Tतपाईंसँग अझै पनि प्रश्नहरू भएमा उनीहरूले तपाईंलाई कोभिड-19 व्यवसाय तथा कार्यकर्ता सोधपूछ फाराम भर्न पनि मद्दत गर्न सक्छन्। तपाईंले सम्पर्क जानकारीका लागि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ जसकारण तपाईं जवाफ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
कोरोनाभाइरस (COVID-19) खोप
कोभिड-19 खोपहरू बारे थप जानकारीको लागि कृपया हाम्रो कोभिड-19 खोप पृष्ठ.
WA सूचित प्रदर्शन सूचनाहरू स्मार्टफोन एप
तपाईं आफ्नो फोनमा WA Notify कसरी थप्ने भन्ने कुरासहित यसबारे थप जान्न चाहनुहुन्छ भने, WANotify.org मा जानुहोस्
रोजगारी तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित संसाधनहरू
यदि तपाईं आफ्नो जागिर गुमाउनुहुन्छ भने, तपाईं बेरोजगारी लाभहरूका लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंलाई बेरोजगारी लाभहरूको दाबी कसरी भर्ने भन्ने बारेमा जानकारी आवश्यक छ भने, तपाईं 1-800-318-6022 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले प्रतिक्रिया जनाएपछि, दोभाषे सेवाहरूमा पहुँच प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो भाषा भन्नुहोस्।
कामदार तथा व्यावसायिक मालिकहरू
कोरोना भाइरसको महामारीले हाम्रो राज्यका सयौं हजार कामदार र रोजगारदाताहरूलाई प्रभाव पारेको छ।
कामदारहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि, रोजगारदाताहरूले निम्न कार्य गर्न आवश्यक छ:
आफ्ना कामदारहरूलाई उनीहरूले बुझ्ने भाषामा COVID-19 का संकेत तथा लक्षणहरूको बारेमा शिक्षा दिन।
सामाजिक दूरीको योजना कार्यान्वयन गर्न।
बारम्बार सफाई र सरसफाई कार्य सञ्चालन गर्न।
बारम्बार र उचित हात धुने कार्यलाई सुनिश्चित गर्न।
बिरामी कर्मचारीहरू घरमै बस्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न।
तलबी बिरामी बिदा, कामदारको क्षतिपूर्ति बारे सामान्य प्रश्नका जवाफहरू र कार्यस्थल सुरक्षा आवश्यकताहरूको सारांश Department of Labor & Industries बाट धेरै भाषाहरूमा उपलब्ध छन्।
यदि तपाईंसँग आफ्नो कार्यस्थलको सुरक्षा सम्बन्धी सरोकारहरू छन् भने, तपाईं Department of Labor & Industries लाई सिधै 800-423-7233 मा फोन गरेर उजुरी दायर गर्न सक्नुहुन्छ। फोनमार्फत दोभाषे सेवाहरू उपलब्ध छन्।
यदि तपाईंसँग COVID-19 को अवधिमा आफ्नो व्यवसाय र कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू छन् भने, तपाईं रोजगार सुरक्षा विभागमा 855-829-9243 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ।
स्वास्थ्य स्याहार तथा स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी संसाधनहरू
तपाईं नि:शुल्क वा न्यून लागतको स्वास्थ्य बीमाका लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ। Health Care Authority (स्वास्थ्य स्याहार प्राधिकरण) मा 1-855-923-4633 मा फोन गर्नुहोस्। तिनीहरूले प्रतिक्रिया जनाएपछि, दोभाषे सेवाहरूमा पहुँच प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो भाषा भन्नुहोस्।
Alien Emergency Medical (AEM) कभरेज भनेको योग्य चिकित्सा आकस्मिक अवस्था भएका र नागरिकता वा अध्यागमनसम्बन्धी आवश्यकताहरू पूरा नगरेका व्यक्ति वा 5-वर्षे बार पूरा नगरेका योग्य व्यक्तिहरूका लागि सञ्चालित कार्यक्रम हो।
Help Me Grow वाशिङ्गटन हटलाइन 1-800-322-2588 ले तपाईं योग्य रहनुभएका विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा सेवाहरू पहिचान गर्न र तपाईंलाई त्यसमा आवेदन दिन मद्दत गर्न सक्छ। यसमा निम्न कुराहरू समावेश छन्:
WIC (महिला, शिशु तथा बालबालिका पोषण कार्यक्रम)
बालबालिका, गर्भवती महिला र वयस्कहरूका लागि स्वास्थ्य बीमा
Take Charge Program (टेक चार्ज कार्यक्रम) मार्फत जन्म नियन्त्रण
स्वास्थ्य तथा परिवार योजना सम्बन्धी क्लिनिकहरू
गर्भावस्था तथा बच्चाका आपूर्तिहरू
स्तनपान सम्बन्धी सहायता
तिनीहरूसँग खाद्य कार्यक्रम र संसाधनहरू पनि छन्।
आप्रवासी र शरणार्थी सम्बन्धी जानकारी
Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ले आप्रवासीहरूलाई कोभिड-19 बारे महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू र आप्रवास सोरकारहरू बुझ्नमा मद्दत गर्दछ। थाहा हुनुपर्ने अन्य महत्त्वपूर्ण केही कुराहरू:
अस्पताल र क्लिनिकहरूमा ICE सँग नागरिकता वा अध्यागमन स्थिति साझा गर्न अनुमति छैन।
COVID-19 को परीक्षण गराउने र परोपकार वा छूटप्राप्त चिकित्सा स्याहार पहुँच गर्ने कार्यले ग्रीन कार्ड वा नागरिकताका लागि आवेदन दिने तपाईंको क्षमतामा असर पार्दैन।
बेरोजगारी लाभहरूका लागि आवेदन दिन तपाईंलाई मान्य सामाजिक सुरक्षा नम्बर आवश्यक हुन्छ। यदि तपाईं बेरोजगारी लाभहरू प्राप्त गर्ने बारेमा कोही व्यक्तिसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने 1-800-318-6022 मा फोन गर्नुहोस्।
बेरोजगारी लाभहरू प्राप्त गर्ने कार्यले सार्वजनिक आदेश सम्बन्धी नियमहरू अन्तर्गत ग्रीन कार्ड वा नागरिकताका लागि आवेदन दिने तपाईंको क्षमतालाई जोखिममा पार्दैन।
तपाईं Covid-19 लागेको बिरामीको स्याहार गर्नका लागि वा आफू सो भाइरसबाट बिमारी भएमाआफ्नो स्याहार गर्नका लागि वाशिङ्गटन राज्यको परिवारिक तथा चिकित्सा तलबी बिदाका लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ। यो लाभ प्राप्त गर्नका लागि तपाईंलाई सामाजिक सुरक्षा नम्बर आवश्यक हुँदैन। ESD ले अन्य धेरै प्रकारका कागजातहरू स्वीकार गर्छ।
यदि तपाईं सहायताको खोजीमा हुनुहुने एक व्यावसायिक स्वामित्वकर्ता हो भने, संघीय सानो व्यवसाय प्रशासनबाट आपतकालीन ऋणको लागि आवेदन दिनाले एक निवासी कार्ड वा राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने तपाईंको योग्यतालाई जोखिममा पुर्याउनेछैन।
Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ले तपाईं आफ्नो वा परिवार सदस्यको स्थिति वा आफ्ना लाभहरू बारे अनिश्चित भएमा आप्रवास वकील, आप्रवास अधिकारी वा Department of Justice (DOJ) द्वारा अधिकृत प्रतिनिधिलाई सम्पर्क गर्ने सुझाव दिन्छ। तपाईं अमेरिकी आप्रवास वकील संघको मार्फत वकील फेला पार्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ वा DOJ द्वारा अधिकृत संस्थाको वेबपृष्ठमा जान सक्नुहुन्छ।
ORIA मा शरणार्थी र आप्रवासीहरूको मद्दत गर्नका लागि निम्न कार्यक्रमहरू छन्:
जागिर खोजी तथा प्रशिक्षण।
वृद्ध , बालबालिका, विद्यार्थी तथा अन्य शरणार्थीहरूका लागि सहायता।
COVID-19 को अवधिमा नियमित कार्यक्रमहरू ढाढैबाट सञ्चालन हुन्छन्। कार्यालयमा तपाईंलाई जागिरहरू वा बेरोजगारीमा मद्दत गर्न, तपाईंको शिक्षामा सहायता गर्न तथा आवास सम्बन्धी मद्दत उपलब्ध गराउनका लागि नयाँ सेवाहरू रहेका छन्। शरणार्थी नगद सहायता तथा शरणार्थी चिकित्सा सहायता योग्यतालाई सेप्टेम्बर 30, 2020 सम्म लम्ब्याइएको छ।
सेवाहरू तथा थप जानकारीका लागि, 360-890-0691 मा फोन गर्नुहोस्।
आप्रवासीका अधिकार, रोक लगाइएका नातेदार/साथीका लागि रेफरल सहायता प्राप्ति र अन्य सम्बन्धित जानकारीका बारेमा जिज्ञासाहरूका लागि, तपाईं वाशिङ्गटन आप्रवासी समन्वय नेटवर्कको हटलाइनमा 1-844-724-3737 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। फोनमार्फत दोभाषे सेवा उपलब्ध छ।
मानसिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य
यो तनावपूर्ण समय हुन सक्छ। तपाईं वा तपाईंको प्रियजनले निराश, चिन्तित, डराएको वा रिसाएको महसुस गर्नु सामान्य हो। तपाईं एक्लो हुनुहुन्न। सहायता खोज्दा तथा यसको अनुरोध गर्दा केही हुँदैन।
सबैजनाले तनाव र कठिन अवस्थाहरूमा भिन्न-भिन्न तरिकाले प्रतिक्रिया जनाउँछन्। तपाईंले गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको आफ्नो, आफ्नो परिवार र आफ्नो समुदायको आफूले सकेसम्मको ख्याल राख्नु हो।
चुनौतीपूर्ण अवस्थाहरूमा तपाईंलाई के कुराले तिनीहरूको सामना गर्न मद्दत गर्छ? के तपाईं साथीहरू र परिवारको सम्पर्कमा आउनुभएको वा उहाँहरूसँग पुन: जोडिनुभएको छ? गहिरो श्वासप्रश्वास तथा तन्काउने सम्बन्धी केही कार्य, केही व्यायाम वा रातको उचित निद्रा हुन सक्छ? आफ्नो स्याहार गर्नको लागि समयलाई प्राथमिकतामा राख्ने कार्यले, यद्यपि त्यसले तपाईंको ध्यान राख्न सक्छ, तनावलाई कम गर्नमा मद्दत पुर्याउन सक्छ।
Washington Listens मा 1-833-681-0211 मा फोन गर्नुहोस्। फोनमार्फत दोभाषे सेवाहरू उपलब्ध छन्। COVID-19 को महामारीको प्रतिक्रियामा, वाशिङ्गटनले Washington Listens भनिने सहायता कार्यक्रम सुरुवात गरेको छ। Washington Listens सेवाहरूको प्रयोग गर्ने मानिसहरूले उन्नत तनावलाई व्यवस्थित गर्न र COVID-19 को कारणले भएका परिवर्तनहरूको सामना गर्न सहायता प्राप्त गर्छन्। वाशिङ्गटनमा रहेका जोकोहीका लागि सहायता विशेषज्ञसँग कुरा गर्न Washington Listens उपलब्ध छ। फोन गर्नेहरूले आफ्नो क्षेत्रमा सहायता र सामुदायिक संसाधनहरूमा संयोजन प्राप्त गर्छन्। कार्यक्रम नामरहित छ।
यदि तपाईं संकटमा हुनुहुन्छ र तपाईंलाई परामर्श प्राप्त गर्नका लागि कसैसँग कुरा गर्न आवश्यक छ भने, केही विकल्पहरू छन्।
Disaster Distress Helpline ले कुनै पनि प्राकृतिक वा मानव-सिर्जित विपत्ति सँग सम्बन्धित भावनात्मक कष्ट को सामना गरिरहेका मानिसहरूका लागि तुरुन्तै संकट सम्बन्धी परामर्श उपलब्ध गराउँछ। 1-800-985-5990 मा फोन गर्नुहोस्। तिनीहरूले प्रतिक्रिया जनाएपछि, दोभाषे सेवाहरूमा पहुँच प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो भाषा भन्नुहोस्। हेल्पलाइन हरेक दिन 24सै घण्टा उपलब्ध छ।
Crisis Connections मा भावनात्मक संकटमा रहेका व्यक्ति, परिवार र मनिसका साथीहरूलाई तुरुन्तै मद्दत उपलब्ध गराउने 24 घण्टे संकट लाइन रहेको छ। यसले King काउण्टीमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई सेवा पुर्याउँछ। भाषा सम्बन्धी दोभाषे सेवा उपलब्ध छ। 1-866-427-4747 मा फोन गर्नुहोस्।
National Suicide Prevention Lifeline ले आत्महत्याको बारेमा सोच्ने मानिसहरूका लागि रोकथाम तथा संकट संसाधनहरू उपलब्ध गराउँछ। प्रियजनहरूले पनि आफ्ना परिवार र साथीहरूलाई मद्दत गर्नका लागि संसाधनहरू प्राप्त गर्न लाइफलाइनमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 1-800-273-8255 मा फोन गर्नुहोस्। यो हटलाइन दिनको 24 घण्टा, हप्ताको7दिन उपलब्ध छ। सेवानिवृत्त सैनिकहरूका लागि विशेष हेल्पलाइन छ। 1-800-273-8255 मा फोन गर्नुहोस् र त्यसपछि 1 थिच्नुहोस्। यदि तपाईं बहिरो हुनुहुन्छ वा कम सुन्नहन्छ भने, 1-800-799-4889 मा फोन गर्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग 18 वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बच्चा छन् भने तिनीहरूले विद्यालयहरूबाट नि:शुल्क खानाहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्ना भएका असक्षमताहरू भएका वयस्कहरू पनि विद्यालयका खानाहरूका लागि योग्य हुन सक्छन्। धेरै अवस्थाहरूमा, यी खानाहरूलाई बस बिसौनीहरू जस्ता विद्यालय बाहिरका स्थानहरूमा वितरण गरिने वा दिइने गरिन्छ। तपाईंको स्कूल डिस्ट्रिक्टले नि:शुल्क खानाहरू उपलब्ध गराउँछ वा गराउँदैन भनी जान्नका लागि त्यसलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
गर्भवती, सुत्केरी महिला र पाँच वर्षमुनिका बच्चाहरूका लागि, तपाईं Department of Health को महिला, शिशु तथा बालबालिका (WIC) कार्यक्रममार्फत खाने कुरा प्राप्त गर्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ। भाषा सहायताका लागि, 1-866-632-9992 मा फोन गर्नुहोस्।
Covid-19 को अवधिमा खाद्यान्नको बढ्दो मागका कारण खाद्य बैंकहरूले आफ्नो समय परिवर्तन गरेका हुन सक्छन् वा तिनीहरूलाई भिडभाडलाई टाढा राख्नको लागि बन्द गरिएका हुन सक्छन्। कृपया जानुअघि फोन गर्नुहोस्। Northwest Harvest भनेको राज्यव्यापी खाद्य बैंक सञ्जाल हो। यो वेबसाइटमा रहेको हरियो बाकसको बायाँपट्टिको बाकसमा आफ्नो शहरको नाम टाइप गर्नुहोस्।
यदि तपाईं पूर्वी वाशिङ्गटनमा बस्नुहुन्छ भने तपाईं Second Harvest मा खाद्य बैंकहरूको सूची फेला पार्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो क्षेत्रमा रहेका खाद्य बैंकहरूको सूचीका लागि यो वेबसाइटमा आफ्नो काउण्टी चयन गर्नुहोस्।
आधारभूत खाद्य फाइदा कार्डहरू
आधारभूत खाद्य फाइदा (EBT) कार्डहरूलाई खाद्य किन्न प्रयोग गर्न सकिन्छ र मानिसको दायरामा उपलब्ध हुन्छ। यु.एस. नागरिकहरूले वासिङ्गटन राज्यको Department of Social and Health Services (DSHS) वेबसाइटको आधारभूत खाद्य पृष्ठ मा यो लाभको लागि आवेदन दिन सक्छन्।
नोटः संघीय सरकारले यो संकटको अवधिमा केही वयस्कहरूलाई आवेदन दिइएको कार्य आवश्यकता निलम्बन गर्‍यो। यद्यपि, संघीय सरकारलाई तपाईं यो लाभको लागि योग्य रहन यु.एस. नागरिक हुन आवश्यक पर्दछ।
माथि व्याख्या गरिएको जस्तै डेबिट-शैलीका कार्डहरू सबै अन्य कार्यक्रम आवश्यकताहरू पूरा गर्ने धेरै गैर-नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराइन्छ। तपाईं DSHS सँग यो लाभको लागि राज्यको खाद्य सहायता कार्यक्रम मा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।
परिवारहरूका लागि जानकारी र संसाधनहरू
यो सम्पूर्ण परिवारका लागि तनावपूर्ण समय हो। यहाँ आफ्ना बालबालिकासँग यो अवस्थालाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने बारेमा केही सुझावहरू छन्:
सुविधाजनक ठाउँमा पारिवारिक छलफलहरू आयोजना गर्नुहोस् र परिवारका सदस्यहरूलाई जिज्ञासाहरू राख्न प्रोत्साहन गर्नुहोस्। साना बालबालिकाहरूले बुझ्ने भाषा प्रयोग गरेर उनीहरूका निश्चित डर वा गलत अवधारणाहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि उनीहरूसँग छुट्टै छलफल गर्ने कुरामा विचार गर्नुहोस्।
तपाईं जानकार रहन आवश्यक भए तापनि, डर वा त्रासलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्ने मिडिया केन्द्रहरू वा सामाजिक मिडियाको प्रयोगलाई कम गर्नुहोस्। महामारीको बारेमा तपाईंका बालबालिकाहरूले कति समय मिडिया कभरेज वा सामाजिक मिडियामा बिताउँछन् भन्ने कुरा प्रति विशेषगरी सचेत रहनुहोस् (र यसलाई सीमित बनाउनुहोस्)।
बालबालिकाहरूका जिज्ञासाहरूलाई प्रोत्साहन गरेर तथा उनीहरूलाई वर्तमान अवस्थाको बारेमा बुझ्न मद्दत गरेर उनीहरूलाई सहायता गर्नमा केन्द्रित हुनुहोस्।
उनीहरूका भावनाहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई मान्यता दिनुहोस्।
उनीहरूलाई आफ्ना भावनाहरू चित्रकला वा अन्य क्रियाकलापहरूमार्फत व्यक्त गर्न मद्दत गर्नुहोस्।
भाइरस कसरी फैलिन्छ भन्ने बारेमा रहेका गलत जानकारी वा गलत बुझाइहरू र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी सबै रोग COVID-19 निम्त्याउन सक्ने नोवल कोरोना भाइरस होइन भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्नुहोस्।
आराम र केही अतिरिक्त धैर्यता प्रदान गर्नुहोस्।
आफ्ना बालबालिकालाई नियमित आधारमा वा अवस्था परिवर्तन हुँदा पुन: भेट्नुहोस्।
सुत्ने समय, खाना खाने समय र व्यायाम गर्ने समय जस्ता कुरामा आफ्नो परिवारको तालिकालाई अनुकूल राख्नुहोस्।
घरमा तपाईं र तपाईंको परिवारलाई अन्य तनावपूर्ण अवस्थाहरूमा उत्कृष्ट महसुस गराउने कार्यहरू जस्तै पढ्ने, चलचित्रहरू हेर्ने, संगीत सुन्ने, खेलहरू खेल्ने, व्यायाम गर्ने वा धार्मिक क्रियाकलापहरू (प्रार्थना, इन्टरनेटका सेवाहरूमा सहभागी हुने) गर्नका लागि समय मिलाउनुहोस्।
एक्लोपन, उदासी, रोग लाग्ने डर, चिन्ता, तनाव र त्रास जस्ता भावनाहरूलाई महामारी जस्तो तनावपूर्ण अवस्थामा समान्य प्रतिक्रियाहरू मान्नुहोस्।
आफ्नो परिवारलाई आफ्ना पारिवारिक तथा सांस्कृतिक मान्यताहरूका साथमा मनोरञ्जनात्मक तथा अर्थपूर्ण क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुन मद्दत गर्नुहोस्।
अतिरिक्त संसाधनहरू र जानकारी
Washington State Department of Health (वाशिङ्गटन राज्य स्वास्थ्य विभाग) - कोरोना भाइरस सम्बन्धी वेबपृष्ठ
वाशिङ्गटन राज्य निकायका फोन नम्बर र सेवाहरूको सूची
वाशिङ्गटनका निवासीहरूका लागि धितोसम्बन्धी सहायता
रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र – कोभिड-19 वेबपृष्ठ
आफ्ना उपयोगिता बिलहरू भुक्तान गर्न मद्दत आवश्यक छ? तपाईं कोभिड-19 महामारीको बेला आफ्ना विद्युत, प्राकृतिक ग्यास वा पानीका बिलहरू भुक्तान गर्न सक्नुभएको छैन भने, मद्दत उपलब्ध छ।
Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)
घृणा/भेदभाव कार्यको रिपोर्ट गर्नुहोस्
COVID-19 का स्रोतहरू